Landy: avadiho ho toy ny sary an-tsary navoaka ny data sy ny takelaka Martech Zone
Alahady, Jolay 19, 2015 Alahady, Jolay 19, 2015 Douglas Karr
Efa mba nanana takelaka iray ve ianao izay nanana fanangonana tahiry mahafinaritra ary te-hijery an'io fotsiny ianao - saingy ny fitsapana sy ny fanaingoana ireo tabilao natsangana tao anatin'ny Excel dia sarotra loatra ary nandany fotoana? Ahoana raha te-hanampy data ianao, hitantana azy io, hampakatra azy ary hizara ireo sary ireo aza.
Afaka miaraka Silk. Ny silk dia sehatra famoahana data.
Ny landy dia misy angona misy lohahevitra manokana. Na iza na iza dia afaka mizaha Silk hijerena data ary hamorona tabilao, sarintany ary pejin-tranonkala mahafinaritra. Amin'izao fotoana izao, pejy Silk an-tapitrisany no noforonina.
Ity misy ohatra iray
Tsidiho ny Tambajotra sosialy 15 lehibe indrindra Lasoà hijerena, hizarana na hampiorina ireo sary an-tsary noforonina aza tamin'ity fanangonana data ity. Ity misy fampidirana mivantana ny tabilao fisehon'ny statistikan'ny mpampiasa:
Data avy amin'ny jeneralindustries.silk.co
Ataovy mifanerasera ireo antontan-taratasy - Raha tokony handefa PDF tsy miovaova, takelaka na rohy avy amin'ny Google Docs, dia ampiasao Silk mba hanaovana tranokala feno fifandraisana izay mampifandray ny mpampiasa ary mandrisika azy ireo hilalao amin'ny angon-drakitrao.
Ampidiro na aiza na aiza ny angona azo ifandraisana - Raiso ny masonao amin'ny Silk ary ampiasao manerana ny tranonkala. Ampidiro ao amin'ny Tumblr, WordPress, ary sehatra fanontana maro hafa.
Manampia tag hahatonga ny asanao ho voalamina araka ny salantsalany, ny fomba na ny sokajy nofidinao. Rehefa manampy ny angon-drakitra toerana dia afaka manamboatra sarintany ihany koa ianao.
Mametraka Silk hampiasaiko dia nanondrana ny laharan'ny teny lakile azontsika avy amin'ny Semrush ary nanangana sary an-tsehatra haingana izay mamela ahy handamina ny filaharana sy hijery teny lakile izay nisy laharana ambony aho ary nisy volavolan-karoka iray taonina… raha ny marina dia ampahafantaro ahy hoe aiza no ahafahan'ny fanatsarana sy fampiroboroboana hitarika fivezivezena betsaka kokoa. Azoko natao izany tamin'ny alàlan'ny fanasokajiana sy ny sivana ny angon-drakitra… fa ny fisehoana an-tsary dia nampiavaka azy kokoa!
Tags: famoahana datasehatra famoahana dataData Visualizationsehatr'asa fampisehoana datalandylandy